गरिमा धान लगाएका किसानले क्षतिपूर्ति पाउन मुद्दा लड्नुपर्ने
चितवन । गरिमा जातको वर्णशंकर धान लगाएका किसानले क्षतिपूर्ति पाउन बीउ विक्रेताविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानमा बाला नलागेका विषयमा कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो । धानको डीएनए परीक्षण गर्दा नक्क...
६ महीनामा रू. ७ अर्ब राजस्व संकलन
रसुवा । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ६ महीनामा रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रू. ७ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन भएको छ । रसुवा भन्सार कार्यालय, टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार गत आवको शुरूको ६ महीनामा भने रू. ५ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । कार्यालयल...
रसुवा भन्सारबाट ६ महीनामा ७ अर्ब राजस्व संकलन
माघ २, रसुवा । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म छ महीनामा रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रू.७ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन भएको छ । दैनिक सरदर रू.३ करोड राजस्व संकलन हुने गर्छ । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार...
गरिमा धान लगाउने किसानले क्षतिपूर्तिका लागि बीउ विक्रेताविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने
माघ २, चितवन । गरिमा जातको बर्णशंकर धान लगाएका किसानले क्षतिपूर्तिका लागि बीउ विक्रेताविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानमा बाला नलागेका विषयमा कारवाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो । &n...
औद्योगिक ग्रामका लागि थाहालाई ९२ लाख
माघ २, हेटौंडा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले थाहानगरलाई औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि रू.९२ लाख उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयले थाहानगरसहित ३२ स्थानीय निकायलाई रकम उपलब्ध गराएको छ । पहिलो चरणमा यी स्थानीय तहले पाएको रकम प्रदेश सरकारले छनोट गरेर पठाएअनुसार सोमवार ३२ स्थानीय तहमध्ये...
यातायात व्यवसायी भन्छन् : ब्लुबुकको आधारमा प्यान लिन कठिनाइ
हेटौंडा । सरकारले ब्लुबुकका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक कठिनाइ भोग्नुपरेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । गत पुस ३ गते नै भएको उक्त निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो हेटौंडाका यातायात व्यवसायीले गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशा...
रंगशाला बनाउन गल्छी गाउँपालिकाले दियो वालुवा
काठमाडौं । नेपाल टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन १०० टिपर बालुवा निःशुल्क ढुवानी गर्ने भएको छ । समितिले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले जनस्तरबाट संकलित रकमबाट चितवनमा निर्माणाधीन रंगशालालाई धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले उपलब्ध ग...
चितवन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग निरन्तर रहने बताएकी छिन् । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा मंगलवार चिनियाँ मेडिकल सहयोगको २०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी दिनमा अस्पतालको स्तरोन्नति र विक...
लाभग्राहीको लापरबाही : पहिलो किस्ता रकम बुझेर घर नबनाउंँदा करौडौं रकम जोखिममा
चितवन । भूकम्प प्रभावितले घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर निर्माण शुरू नगरेपछि सरकारको करोडौं रकम जोखिममा पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ, चितवनले दिएको तथ्यांकअनुसार १ हजार ७९० परिवारले पहिलो किस्ता रकम बुझेर हालसम्म पनि घर बनाएका...
पुस २८, चितवन । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतवार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पुर्‍याउने जानकारी दिइयो । ...